Araraoty izao ny tranonkalanao WordPress ho an'ny finday miaraka amin'ny "AMP mora" ary havaozy ny tranokalanao ho an'ny Mobile First Index . Miaraka amin'ny plugin Google-AMP ho an'ny WordPress, ny lahatsoratrao WordPress dia mahazo kinova AMPHTML, izay (tadiavin'i Google) dia tehirizina ao amin'ny cache Google AMP rehefa mandeha ny fotoana, ary ankoatran'ny kaody AMPHTML haingana kokoa, indray ho an'ny fotoana fampidinana haingana kokoa amin'ny finday fitaovana Fitaovana.
Ampandehano ny WordPress AMP:
Ampidiro ny plugin WordPress AMP - (tanana)
Azafady mba mariho fa ny fiantsoana ny pejy AMP amin'ny fotoana voalohany dia mety haharitra ela kokoa noho ny mahazatra! - Rehefa mamoaka voalohany na rehefa manavao, ny plugin dia mamadika ny kaody HTML ho kaody AMPHTML, izay mitaky fotoana bebe kokoa na latsaka, arakaraka ny habetsaky ny atiny. - Ny fotoana farany, raha ny marina , ny fotoana fampidinana azy dia tsy noho ny pejy topy maso AMP, fa ny fampisehoana ny pejy Google AMP avy eo avy amin'ny cache an'ny AMP, izany hoe amin'ny alàlan'ny lozisialy haingana kokoa an'ny motera fikarohana - izany hoe ny ora anaovan'ny Ny pejy mialoha dia tsy voatery hitovy amin'ny manaraka mivantana avy amin'ny motera fikarohana!